အင်္ဂါနေ့ဖွားတို့ကံဇာတာ ( ၁၃၈၃ခုနှစ် ) – ဗေဒင်သုတ
အင်္ဂါနေ့ဖွားတို့ကံဇာတာ ( ၁၃၈၃ခုနှစ် )
July 5, 2021 August 5, 2021 smt	View : 3641
အင်္ဂါနေ့ဖွားများဟာ ယခုနှစ်အတွင်း … အတိတ်ကာလမှ ရင်းနှီးပတ်သက်ခဲ့ဖူးသူများ၊ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်များနှင့် ပြန်လည် ဆုံဆည်းရတတ်ချိန် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် လပြည့်နေ့များ ၊လပြည့်နေ့နဲ့ အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်နေသည့် နေ့ရက်များတွင် ပြန်ဆုံရတတ်သည်။ ငွေကြေးလေလွင့်မှု ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်လွယ်သော နှစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအချို့ ကောင်းသော ၀င်ခြင်းဖြင့် ၀င်လာမှုများ များပြားတတ်ချိန်လည်း ဖြစ်သည်။
ဒီတစ်နှစ် အလုပ်အကိုင်နှင့်အကျိုးစီးပွား – အကျိုးစီးပွား ရှာဖွေရာတွင် အနည်းငယ် ထိမ်းချုပ်ရခက်ခဲမည်။ မိမိ အကျိုးစီးပွား ရရှိနိုင်သည့် အနေအထားကို ပြင်ဆင်ရခြင်း၊ ပြောင်းလဲရခြင်း ၊ ပုံစံပြောင်းပြီး စီးပွား ရှာဖွေရခြင်း များပြားတတ်သည်။
အပြောင်းအလဲများကို လက်ခံနိုင်ပြီး လိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းလဲနိုင်မှု ရှိမှသာ အကျိုး ရလွယ်တတ်သော ကာလဟု ဆိုနိုင်သည်။ အမည်နောက်ဆုံး တွင် စနေနံဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားသော အင်္ဂါနေ့ဖွားများ အထက်အရာရှိ အကြီးအကဲတို့နှင့် အတိုက်အခံ ဖြစ်ရတတ်ချိန်၊ မင်းအစိုးရများနှင့် အတိုက်အခံ ရန်ကြုံတတ်ချိန် ဖြစ်၏။
ဒီတစ်နှစ် မေတ္တာရေး အိမ်ထောင်ရေး – အိမ်ထောင်သည်များ … စနေနေ့များတွင် အနည်းငယ် အိမ်တွင်းရေး ဆူပူတတ်သည်။ နေအိမ်တွင် စနေနေ့ဖွားတစ်ဦးဦး ညဉ့်အိပ်ညဉ့်နေ လာရောက် တည်းခိုခြင်း၊ သို့မဟုတ် စနေနေ့ဖွားတစ်ဦးဦး ယခုနှစ်အတွင်း မိမိအိမ်တွင် လာရောက်နေထိုင်ခြင်းမျိုး ကြုံပါက အိမ်ထောင်ရေး ရန် ပေါ်တတ်သည်။ ပျိုရွယ်သူများ အပြိုင်အဆိုင်ပါသော မေတ္တာရေးကဏ္ဍ ပေါ်မည်။
ဒီတစ်နှစ် ကျန်းမာရေး – အရေပြားနှင့် အာရုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက်များ ပေါ်လွယ်သော ကာလ ဖြစ်သည်။ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ၊ ဆီးဝမ်းသွေးလေ မမှန်ကန်မှု ကို အချို့သော အင်္ဂါနေ့ဖွားများ ခံစားရတတ်သည်။ အချို့သော အင်္ဂါနေ့ဖွားများ အပြင်းအထန် ၀မ်းကိုက်ရောဂါမျိုးကဲ့သို့ ခံစားရတတ်ချိန်လည်း ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အင်္ဂါနေ့နှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များသည် ကျန်းမာရေး အားနည်းချက်များ ပိုမိုဖြစ်လွယ်သည်။
ဒီတစ်နှစ် ပညာရေး – အခက်အခဲများ ပေါ်လာပြီး ကြုံကြိုက်ပြီး ၊ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်ကြိုးစားချိန်တွင်မှ အောင်မြင်မှု ထင်ထင်ရှားရှား ရတတ်သည့်ကာလ ဖြစ်သည်။
အထူးပြုမှတ်ချက် – ဒီနှစ်က အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေ မိမိမြတ်နိုးနှစ်သက်သော အရာဝတ္ထုများ ဆုံးရှုံးလွယ်သော ကာလပါ။ တနုံ့နုံ့နဲ့ နှမြောတသ ဖြစ်နေရမယ့် အခြေအနေမျိုးလေးတွေ ကြုံလွယ်တဲ့အချိန်ပေါ့။ ကံကောင်းတာလေးတစ်ခုက ဆုံးရှုံးမှုကို အစားပြန်ထိုး နှစ်သိမ့်နိုင်ခွင့်လေး ပြန်ရနိုင်ခြင်းပါပဲ။
အထူးသဖြင့် လပြည့်နေ့တွေ …လပြည့်နေ့နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးနေ့ရက်တွေမှာ …ဆုံးရှုံးစရာပေါ်လွယ် နှမြောတသစရာ ကြုံလွယ်နေတတ်သည်။ ဒါကြောင့် ထိုနေ့ရက်တွေမှာ စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံတာကအစ အစစ သတိထားပြီးမှ လုပ်ကိုင်ကြသင့်ပါသည်။
အင်္ဂါနေ့ဖွားဖြစ်ပြီး … နာမည်ရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ကြာသပတေးနံ ဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားမိမယ်ဆိုရင် …ဒီတစ်နှစ်ထဲမှာ ပိုင်ရှင်ရှိပြီး ဖြစ်သော ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိထားဆက်ဆံသင့်သည်။ တံဆိပ်ကပ်ပြီးသား ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တို့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားလိုက်စားမှုကို ခံရတတ်သောကာလ ဖြစ်လို့ပါပဲ။
အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေအဖို့ သည်တစ်နှစ်မှာ … လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ တစ်ကြိမ်နဲ့ မအောင်မြင်တတ်ပါ။ အကျအရှုံး များတတ်ပါတယ်။ သို့သော် စိတ်မလျော့လိုက်ပါနဲ့၊ နောက်တစ်ကြိမ်ကို ထပ်မံ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ အောင်မြင်မှုရနိုင်လို့ပါပဲ။
ပထမအကြိမ် ကျရှုံးပြီးသား အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေကို ပြန်လည်အောင်မြင်မှုရဖို့ ကြိုးစားရာမှာလည်း .ဖြစ်နိုင်သမျှ. ..လပြည့်နေ့ ၊ သို့မဟုတ် လပြည့်နေ့နှင့် နီးစပ်သော နေ့ရက်များ …၊ သို့မဟုတ် တနင်္လာနေ့မျိုးလေးတွေမှာ ပြန်ကြိုးစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကပ်သီးကပ်သပ်ကလေးတွေ စမ်းသပ်ကြည့်ချင်တဲ့ အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေအတွက်ကတော့ လပြည့်နေ့မျိုးမှာ…. အမျိုးသမီးအကြီးအကဲတစ်ဦးဦးကို သွားကန်တော့ပါ။ အမိ ၊ အစ်မ ၊ အဒေါ် ၊ အဖွား ၊ ကျောင်းတုန်းက ဆရာမ …စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ထို့သို့ သွားကန်တော့သည့် ၀တ္ထုပစ္စည်းတွေထဲမှာ သကြားလုံးထုပ်လေးပါ ထည့်ကန်တော့လိုက်။ ပြီးရင် ..သကြားလုံး နှစ်လုံးလောက် ကို ပြန်စွန့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုကြည့်ပြီး ပြန်ယူလာခဲ့။ တစ်နှစ်လုံး အရည်မပျော်မချင်း ဆောင်ထားနိုင်။ ဘာကောင်းသလဲတော့မသိ။ လုပ်ကြည့်ပေါ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…. ကုသိုလ်လည်းရ ဟန်လည်းကျပါစေခင်ဗျား။အားလုံးသော အင်္ဂါနေ့ဖွားများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ လေးစားလျက် – ဆရာစိုးမိုးထွန်း (ခေါ်) ဆရာဝေသာလီမောင်ဖုန်း – 09 789 333 791
← တနင်္လာနေ့ဖွားတို့ ကံဇာတာ (၁၃၈၃ခုနှစ်)
မိသားစုအတွက် ပေးဆပ်အနစ်နာခံရတတ်သော ဇာတာရှင်များ →
ဘုရားပန်းအိုးတွေ လဲတဲ့အခါ… (49,343 views)
ဒီနှစ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်ထဲမှာ ငွေဝင်၊ ထီပေါက် ကံကောင်းမယ့်သူများ (44,662 views)